Siyaasiga Dronka ah ee Cali Gueay oo faaleeyay Qidada Lagu kala Hororsanayo kursiga Gudoonka barlamaanka iyo ka caasimada hargeya | Biyoguurenews.com
Home Wararka Siyaasiga Dronka ah ee Cali Gueay oo faaleeyay Qidada Lagu kala Hororsanayo...
Siyaasiga Dronka ah ee Cali Gueay oo faaleeyay Qidada Lagu kala Hororsanayo kursiga Gudoonka barlamaanka iyo ka caasimada hargeya
Marka hore waa run in ilaa iyo xad xisbiyada mucaaridku gaar ahaan WADDANI uu doorashadan guul lama filaan ah ka gaadhay markii uu kuraasida ugu badan ee wakiilada isagu ku guulaystay. Dabcan hadii aan ku hambalyeeyo lafteedana wax dhibaato ah uma arko mana ahi shakhsi ka tirsan sadexda xisbi midnaba. Keliya waxan qirayaa oo aan cid kalena dafiri karin in WADDANI uu guusha ku kasbay dadaal iyo qorshayaal uu aad uga baaraan degay sidii guusha uu kasbay ugu xaqiijin lahaa waanay u shaqaysay hadii aan la is xaasidayn.
Mucaaridka waxa kale oo caawiyay xaaladda xisbul xaakimka Kulmiye oo dad badan oo taageersanaa ay muddoba ka dayrinayeen balse laga dhego adaygay ka hor doorashadaba. Intaasoo jirta hadana waxa run ah oo la yidhaa ciyaari waa gelin dambe. Kulmiye wax badani waxay kaga xidhan yihiin hadba sida Madaxwayne Muuse Biixi uu uga falceliyo guul darrada xisbigiisa ee doorashadan iyo talaabooyinka uu qaado si xisbigiisu uga soo kaban karo khasaaraha doorashadan xili ay 16 bilood oo keli ahi ka hadhsan tahay doorashadii Madaxtooyada.
In kasta oo weli natiijadii rasmiga ahayd ee doorashadu aanay soo bixin haddana waxa durtaba muuqda in uu bilawday olole hor leh oo lagu kala xodxodanayo xildhibaanadii iyo xubnihii golayaasha degaamada ee ku soo baxay doorashada. Waxa la isku hayaana waa yaa noqon doona Shirgudoonka Golaha cusub ee wakiilada iyo weliba Meeyarada (Gudoomiyayaasha Golayaasha Degaanka) gaar ahaan degmooyinka heerka “Grade A” oo kuwa ugu muhiimsan ee mucaaridku ku taamayo ay yihiin caasimadda Hargeysa iyo Berbera oo ah magaalo-dekedeedka keliya ee Somaliland.
Dhinaca kale isbahaysiga labada xisbi ee mucaaridka waxa jira dad sharaystay ama ka shakiyay balse maaha wax ku cusub Somaliland. Tan iyo xiligii Rayaale way dhici jirtay in mucaaridku mararka qaar ay heshiisyo gaar ah oo isxulafaysi ay dhex maraan si ay mawqifyo midaysan uga qaadan karaa arimo gaar ah oo xadidan xilyo gaar ah, oo ay u arkaan in ay jiraan dano gaar ah oo ay wadaagi karaan ama ay tahay in ay u midoobaan si ay isaga dhiciyaan xisbul xaakimka markaa talada haya. Hadana waa la og yahay oo maaha qasab in wax kasta mucaaridku ay isku aragti ka noqdaan waxanay inta badan ku xidhan tahay danaha ay wada leeyihiin iyo kuwa ay kala leeyihiin. Mararka qaar waxaba dhici jirtay in labada xisbi ee mucaaridka uu mid la daawaysto xisbul xaakimka maanta lafteeda iyo mustaqbalka dhawna maaha wax aan la fili karin in ay dhacdo.
Previous articleTaliban oo ballan-qaad u sameysay Afghaaniyiinta u shaqeeya Mareykanka iyo NATO
Next articlePakistan: Maxaa sababay in dumarka laga mamnuuco inay dukaamada tagaan?